Taageerada Holms SK (BILAASH) Marka aad la ciyaarta Swedish ciyaaro! | Holmbygden.se
Taageerada HSK iyo diiwaangeliso kulan ee Game Swedish halkan!
Haddii aad mararka qaarkood soo iibsadaan a TIA-badan ama ciyaaro on Stryktipset, qalmay, Keno, Lotto, Turub ama wax kasta oo kale oo ka mid ah ciyaaraha Swedish ah? Hadda waxaad isku taageeri karaan Holms SK!
In Games Swedish waa dheri loo yaqaan “xidid Grass” on dhan 50 million oo dad badan ay ka soo wareegto in ay doonayaan in ay taageeraan SK Holm marka ay ciyaaraan, ayaa in ka badan kooxda ka qeyb qaataan – gebihaanba ma jirto kharash dheeraad ah si ay ciyaaryahanka!
Khasnadda iyo dheeraad ah in ay noqon doonto – dheeraad ah gogoshana!
Sanadkii la soo dhaafay, kooxda helay ee ku saabsan 3500 SEK by 32 taageerayaasha pc HSK oo sanadkan waa inay noqdaan dheeraad ah!
Ma leedahay qaraabo ama saaxiibo ciyaari!? Weydii in ay tagaan holmssk.se/spela iyo diiwaan kulanka.
Fadlan sidoo kale this wadaagaan on facebook, twitter m.m.
Sidee hal bilaabi taageeraya Holm SK?
Alt. 1: Saxiix halkan in aad taageero SK Holm ah. ka dibna riix “taageerada” bogga. Markaas saxiixdo ama la abuuro login ah haddii aadan horay u leeyihiin hal.
Alt. 2: Waxa kale oo suuragal in la yidhaahdo in ay dukaanka marka aad u ciyaareyso in aad rabto in aad si ay u taageeraan SK Holm ah.
Waxaad kaliya oo aad qorayo taageeraya Holm SK mar, waxaa markaas si toos ah!
Waad ku mahadsan tahay taageeradaada! /Holms SK
news Previous in widget NEWS ah Select Month June 2019 (1) Laga yaabaa 2019 (1) March 2019 (5) February 2019 (3) January 2019 (1) December 2018 (1) October 2018 (1) September 2018 (4) August 2018 (1) July 2018 (5) June 2018 (6) Laga yaabaa 2018 (6) April 2018 (2) March 2018 (2) December 2017 (2) July 2017 (2) June 2017 (1) Laga yaabaa 2017 (4) April 2017 (2) March 2017 (4) February 2017 (4) January 2017 (1) December 2016 (2) November 2016 (1) September 2016 (4) June 2016 (5) Laga yaabaa 2016 (5) April 2016 (3) March 2016 (6) February 2016 (4) January 2016 (2) December 2015 (3) November 2015 (4) October 2015 (1) September 2015 (5) August 2015 (4) July 2015 (4) June 2015 (3) Laga yaabaa 2015 (7) April 2015 (4) March 2015 (4) February 2015 (4) January 2015 (8) December 2014 (3) November 2014 (4) October 2014 (5) September 2014 (3) August 2014 (4) July 2014 (2) June 2014 (6) Laga yaabaa 2014 (5) April 2014 (8) March 2014 (11) February 2014 (4) January 2014 (7) December 2013 (12) November 2013 (12) October 2013 (10) September 2013 (9) August 2013 (15) July 2013 (13) June 2013 (18) Laga yaabaa 2013 (17) April 2013 (13) March 2013 (11) February 2013 (7) January 2013 (13) December 2012 (9) November 2012 (9) October 2012 (6) September 2012 (10) August 2012 (10) July 2012 (4) June 2012 (11) Laga yaabaa 2012 (10) April 2012 (4) March 2012 (7) February 2012 (6) January 2012 (3) December 2011 (3)
9/6: Loss inkastoo waaweyn ...
7/6: Xooray Home badisay ...